Queue-it: Ampio efitrano fiandrasana virtoaly amin'ny tranokalanao mba hitantanana ny firongatry ny fifamoivoizana | Martech Zone
Zoma, Febroary 4, 2022 Zoma, Febroary 4, 2022 Douglas Karr
Tsy afaka mandray baiko izahay… simba ny tranokala satria simba ny fifamoivoizana.
Tsy izany velively no teny tianao ho re raha toa ianao ka efa tafiditra tamin'ny famoahana vokatra, fivarotana an-tserasera, na fivarotana tapakila amin'ny hetsika iray… isan'ny antony:
Fahasorenan'ny mpitsidika – Tsy misy zavatra mahasorena toy ny mamely ny fahadisoana amin'ny script ao amin'ny tranokalanao. Mazàna ny mpitsidika sosotra iray dia mitsambikina ary tsy miverina… ka voadona amin'ny marikao sy very vola miditra.
Fitakiana Serivisy mpanjifa - Ny mpitsidika kivy dia miteraka mailaka sy antso an-telefaona tezitra, mandoa hetra amin'ny ekipan'ny mpanjifanao anatiny.
Ratsy Bot Demand - Misy mpilalao ratsy maromaro any izay fitaovana fanoratana mba hanararaotra ireo hetsika ireo. Ohatra iray ny scalpers izay te hividy tapakila maro ho an'ny fampisehoana malaza. Ny bots dia afaka mandevina ny tranokalanao ary mamafa ny rakitrao.
Fahamarinan'ny mpanjifa – Raha miakatra sy midina tsindraindray ny tranokalanao dia mety tsy ho afaka hiova ny mpitsidika voalohany anao ary mety ho afaka ny mpitsidika any aoriana. Mety hanimba ny lazan'ny marikao indray izany.
Misy vahaolana azo esorina izay apetraky ny orinasa maro mba hanandrana handraisana ny fisondrotana sy ny fisondrotan'ny fitakiana ny tranokalanao. Na izany aza, ireo dia mety sady lafo no tsy mahavita valiny eo no ho eo. Ny tsara indrindra dia ny vahaolana filaharana ny mpitsidika anao. Izany hoe, alefa any amin'ny efitrano fiandrasana virtoaly amin'ny tranokala ivelany ny mpitsidika mandra-pahavitany
Inona no atao hoe efitrano fiandrasana virtoaly?
Miaraka amin'ny fisondrotan'ny fifamoivoizana be dia be, ny mpanjifa milahatra dia afaka miditra amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny efitrano fiandrasana amin'ny filaharana marina sy voalohany. Ny efitrano fiandrasana virtoaly dia manome traikefa tsara ho an'ny mpampiasa, mitazona ny fahamendrehan'ny marikao, manalavitra ny hafainganan'ny bots ratsy sy ny tombony amin'ny habeny. Ataovy azo antoka fa ho eo am-pelatanan'ny mpanjifa sy mpankafy marina ny vokatrao na tapakilanao.
Queue-It: Ny efitrano fiandrasana virtoaly anao
Filaharana-it dia mpamorona sangany amin'ny serivisy efitrano fiandrasana virtoaly mba hifehezana ny firongatry ny fifamoivoizana amin'ny tranokala sy fampiharana amin'ny alàlan'ny fampidinana ireo mpitsidika any amin'ny efitrano fiandrasana. Ny sehatra SaaS matanjaka ao aminy dia ahafahan'ny orinasa sy ny governemanta manerana an'izao tontolo izao hitazomana ny rafitr'izy ireo an-tserasera sy hampahafantarana ny mpitsidika, misambotra ny varotra lehibe sy ny hetsika an-tserasera amin'ny andro sarotra indrindra amin'ny orinasa.
Queue-it manome anao ny fifehezana ny tampon'ny fifamoivoizana an-tserasera izay mandrahona ny hidona ny tranokalanao. Ny fametrahana mpitsidika ao amin'ny efitrano fiandrasana miditra voalohany sy mivoaka voalohany dia mitazona ny tranokalanao amin'ny fomba tsara indrindra rehefa tena zava-dehibe izany.
Filaharana-it dia tarihin'ny fikarohana psikolojia filaharana farany mba hitazomana ny mpitsidika anao ary hanome azy ireo traikefa tsara. Miaraka amin'ny fifandraisana amin'ny fotoana tena izy, ny fotoana fiandrasana aseho, ny fampandrenesana mailaka, ny efitrano fiandrasana azo zahana, ary ny dingana voalohany amin'ny fivoahana dia manome ny mpanjifanao fiandrasana be dia be, hazavaina, voafetra ary ara-drariny.
Misy fomba tsy ara-drariny sy tsy ara-drariny hiatrehana ny fifamoivoizana an-tserasera. Miaraka amin'ny Queue-it, miantoka ny traikefan'ny mpampiasa tsara ianao ary mitazona ny fahamendrehanao. Ny mpanjifa dia miditra amin'ny tranokalanao amin'ny lamina ara-drariny sy voalohany.
Ny fampiasana ny Queue-it dia niantoka ny rariny an-tserasera nandritra ny fampielezan-kevitra sy hetsika be fangatahana ho an'ny mpampiasa an'arivony tapitrisa manerantany. Andramo ny Queue-efitrano fiandrasana virtoaly io ary diniho izay azony atao amin'ny tranokalanao na fampiharana be loatra.
Misoratra anarana amin'ny fitsapana maimaimpoana miaraka amin'ny Queue-it
Tags: fiakaran'ny varotra an-tseraserafilaharana-itfiakaran'ny varotra tapakilafiakaran'ny fifamoivoizanafirongatry ny fifamoivoizanafilaharana virtoalyefitra fiandrasana virtoalyfilaharana tranonkalatranokala fiandrasana
ReferralCandy: Sehatry ny Referral Ecommerce feno azonao atomboka ao anatin'ny minitra